को हुन नेपाल प्रहरीको वाकीटकी सेटसहित पे’स्तोल देखाएर टिकटक बनाउने युवक ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारको हुन नेपाल प्रहरीको वाकीटकी सेटसहित पे’स्तोल देखाएर टिकटक बनाउने युवक ?
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको वाकीटकी सेटसहित पे’स्तोल देखाएर एक युवकले टिकटक बनाएको पाइएको छ। ‘कमलेश यादव६४२२’ नामको टिकटक आईडीबाट पे’स्तोल देखाएर बनाइएको टिकटक भिडियो सार्वजनिक भएको हो।
बा१२च ७४३२ नम्बरको गाडी अगाडि बसेर उनले पे’स्तोलसहित वाकीटकी सेट बोकेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । यद्यपी ती व्यक्ति को हुन् केही खुलेको छैन। तर, ती व्यक्ति नेपाल प्रहरीका कर्मचारी रहेको उनले बनाएको अन्य भिडियोहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।अन्य भिडियोहरुमा उनले मन्त्रीहरुको ब’डिगार्डले लगाउने कपडा लगाएका छन्।
टिकटक बनाउँदा ती युवकले कोहीबेला वाकीटकी सेट सर्टको कल्धरमा झु’ण्ड्याएका छन् त कहिले पाइन्टको गोजीमा, कोहीबेला हातमै लिएको देख्न सकिन्छ। ती युवकले ‘म्या’गजिन खाली रा’उण्ड बिना, चे’म्बर खाली बु’लेट बिना, मेरो जीवन खाली तिमी बिना’ भ्वाइसमा टिकटक बनाएका हुन। जहाँ उनले पे’स्तोल भिरेको प्रष्ट देखिन्छ।
जबकी कुनैपनि प्रहरी कर्मचारीले पे’स्तोल देखाएर टिकटक बनाउन पाउँदैनन्। नेपाल प्रहरीको बर्दी लगाएको फोटो समेत सामाजिक सञ्जालमा हाल्न नपाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको नीति छ। ती युवकले पे’स्तोल देखाएर बनाएको टिकटक भिडियो किन सार्वजनिक गरे? त्यो विषय ग’म्भीर हो।
यस विषयमा छा’नबिन हुने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवरले जानकारी दिए। २०७६ फागुनमा प्रहरी कार्यालयमै ब’र्दी लगाएर पे’स्तोल नचाउँदै टिकटक भिडियो बनाएको आरोपमा प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) रत्नबहादुर थापामाथि कारबाही भएको थियो।